အလွန်ဖတ်သင့်သော စာ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အလွန်ဖတ်သင့်သော စာ။
Posted by Kyi Lwin on Sep 27, 2013 in Copy/Paste |4comments
သီတဂူဆရာတော်ကြီးရဲ့ အလွန်ဖတ်သင့်သော Note လေးပါ ==================================
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းသိသင့်သော သီတဂူဆရာတော်ကြီးရဲ့ အလွန်ဖတ်သင့်သော Note လေးပါ ……။ ♠ အဆုံးထိဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပေးကြပါ။ ————————————————————————————–
မှတ်ချက် ။ သီတဂူ ဆရာတော်ဒေါက်တာ အရှင်ဥာဏိဿရ
ဓမ္မရိပ်မဂ္ဂဇင်းမှပြန်လည်ရေးသားတင်ပြပါသည် ။ မောင်သိန်းထိုက်
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ ဧ။်စာမျက်နှာ မှတဆင့်ပြန်လည်ကူးယူဓမ္မဒါနပြုပါသည် ။
ဆရာတော်ကြီးရဲ့ စကားတွေ ဟာ လက်တွေ့ကျ တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ဂေါတမ ဗုဓ်ဒရဲ့ အယူဝါဒပိုင်းမှာ အမြင်မတူမှုတွေ ကို ဆွေးနွေး လို့ရပြီး ကိုယ်တိုင် သဘောပေါက် မှ လက်ခံ ကျင့် သုံး ရတဲ့ ကာလမ သုတ် အတိုင်းပါ။
လူ့လောက ကြီးမှာ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ လူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့်ပဲ သာယာလှပ ငြိမ်းချမ်းနိုင်သလို၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် မှုတွေကြောင့် ဆင်းရဲ ဒုက္ခတွေနဲ့လည်း တွေ့နိုင်တာပဲမို့လား။
ဒါကြောင့် စိတ်ဓါတ်ယဉ်ကျေးမှု ၊ စိတ်ဓါတ်ငြိမ်းချမ်းမှု တွေ ဟာ ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာလေး သိကြစေချင်ပါတယ်။
အလွန် ဖတ်သင့်သော စာ ဆိုလို့ ….
ကိုယ် အလှမ်းဝေးသော နယ်ပယ်မို့ ….
ကိုယ်နဲ့ အလှမ်းဝေး တယ်လို့တော့ မထင်စေချင်ဘူး။
ဘာသာ အယူဝါဒ ပိုင်း မဟုတ်ရင်တောင် လက်ရှိ လူ့လောက ရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာရင် ဒီအကြောင်းအရာကို တီးမိ ခေါက်မိပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထားတွေ စိတ်ဓါတ်ယဉ်ကျေးမှု ရုပ်ယဉ်ကျေးမှုတွေ ဘယ်လောက်ထိ အရေးပါတယ် ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။